I-COVID-19: Ubhadane lwaseCorona kanye neMidiya Yezokuxhumana | Martech Zone
I-COVID-19: ICorona Pandemic kanye Nezokuxhumana
ULwesibili, May 5, 2020 ULwesibili, May 5, 2020 Hardik Oza
Lapho izinto ziguquka ngokwengeziwe, kulapho zihlala zinjalo.
Into enhle ngemidiya yezenhlalo: awudingi ukugqoka amaski. Ungakhipha noma yini nganoma yisiphi isikhathi noma ngaso sonke isikhathi njengoba kwenzeka ngalezi zikhathi zokushaya ze-COVID-19. Ubhadane luye lwaletha izindawo ezithile ekugxiliseni okucijile, lacijwa imiphetho eyindilinga, lwandisa izingqinamba, futhi, ngasikhathi sinye, lwavala izikhala ezithile.
Abasebenza kanzima njengodokotela, abezimo eziphuthumayo, nalabo abondla abampofu bakwenza lokho ngokuvala umlomo ngemuva kobuso. Labo abathinteka kabi yilo bhubhane futhi abangafundile abatholi ndlela yokusebenzisa izinkundla zokuxhumana ukuvumela umhlaba uzwe ukukhala kwabo okubonakalayo kwendlala. Ama-fatcats akhuluphele abelana ngamaresiphi futhi asebenzisa imithombo yezokuxhumana ukukhombisa ukuthi basihambisa kanjani isikhathi.
Yini Eyenziwa Yimithombo Yezokuxhumana Yokwandisa Ubhubhane?
Facebook kubikiwe unikele ngamasosha obuso angama-720,000 futhi wathembisa ukuwathola nokuwaphakela amanye. Yenze isethembiso sokunikela ngama- $ 145 million kubasebenzi bezempilo nasemabhizinisini amancane.
Whatsapp kudalwe a Ihabhu lolwazi leCoronavirus futhi yavumela i-WHO ukuthi ivule ingxoxo ukuze ixwayise abantu ngobungozi be-coronavirus. Ine kubikwa ukuthi wathembisa u- $ 1 million kuya Inethiwekhi Yokuhlola Iqiniso YasePoynter Institute ukusekela umfelandawonye wamaqiniso we-coronavirus okhona emazweni angama-45 ngokusebenzisa izinhlangano zasendaweni eziyi-100. Kukhona Ukwanda ngama-40% kuWhatsapp ukusetshenziswa.
I-Instagram idinga ukunconywa ngayo ukuthatha izinyathelo ukuvimbela ukusabalala yolwazi olungelona iqiniso.
Twitter abasebenzisi bandile ngenani cishe ngama-23% ezinyangeni ezintathu zokuqala zika-2020 kanti ipulatifomu ivimbela ama-tweets angathinta ukusabalala kwe-coronavirus. I-Twitter inikela nge- $ 1 million ku- IKomidi Lokuvikela Izintatheli futhi I-International Women’s Media Foundation.
LinkedIn kuvulwe izifundo zokufunda eziyi-16 ukuthi abasebenzisi bangafinyelela mahhala futhi ishicilela amathiphu ebhizinisi ngalokho okufanele bakuthumele ngesikhathi sobhadane oluqhubekayo.
Netflix ithembisa okuqukethwe okusha ukugcina abantu bethokozile ngesikhathi sokukhiya okuphoqelelwe.
I-YouTube yenza kancane ngayo umkhawulog izikhangiso ezihlobene ku-Coronavirus.
Fafaza izibalo ezihlanganisiwe lokho kukhombisa ukuthi i-COVID-19 namagama ahlobene ne-coronavirus kukhulunywe ngawo ngaphezu kwezigidi ezingama-20 ezinkundleni zokuxhumana, ezindabeni, nasezingosini ze-TV.
Uhlu luqhubeka ne Snapchat, Pinterest, nezinye iziteshi zokuxhumana zenhlalo zingena. Lokho konke kuhle kodwa abantu bayisebenzisa kanjani imithombo yezokuxhumana phakathi nobhadane?
Abantu kufanele bahlale emakhaya ngenkani futhi lokho kuholela ekuchitheni isikhathi esithe xaxa ezinkundleni zokuxhumana. Abantu abangama-80% badla okuqukethwe okuningi kanti abasebenzisi abangu-68% bafuna okuqukethwe okuhlobene nobhadane. Ngokujabulisayo, akuwona wonke umuntu odlula isikhathi.
Izakhamizi ezimbalwa ezikhathazekile zisungule iwebhu yokuxhumana enikela ngayo futhi isabalalise ukudla okuphekwe ekhaya kwabaswele ngaphandle kokukhomba izindawo zokukhosela nokunakekelwa kwezempilo okuyisisekelo kwabaswele emadolobheni abo. Isibonelo, iqembu labantu baseMumbai laqala ukusebenzisa izinsizakusebenza zabo ukupheka ukudla futhi bakunikeze abaswele. Ikhule yaba ulayini wosizo kanye newebhusayithi enabantu abaningi abajoyina lo msebenzi kwamanye amadolobha.
UK Ganesh weBig Basket, uJuggy Marwaha we-JLL, noVenkat Narayana wePrestige Group bathule ukuqala I-FeedmyBangalore ukusiza abantu ababencishwe amathuba kwezomnotho phakathi nalolu bhubhane lweCovid19. Bazohlinzeka ngokudla ezinganeni ezingaba ngu-3000 eziswele kanye nemindeni yazo ngokusebenzisa IParikrma Humanity Foundation. Inhloso yabo ukuphaka ukudla okungu-3 lakh ngesikhathi sokukhiya phansi.
Isithombe sesikweletu: Jll
Ama-NGO enza konke okusemandleni awo ukuhlinzeka ngokudla, izinto zokuhlanza indle, okokuthenga ukudla, kanye nezifihla-buso ngalesi sikhathi sokushaywa ubhubhane.
Osaziwayo bayangena ngezeluleko ezingakhokhelwa zokuthi ungaphepha futhi uvikeleke kanjani. Kucatshangwa ukuthi abantu basamukela kalula iseluleko uma sivela kosaziwayo.
Noma kunjalo, kukhona ukwehla, futhi.
Uma kunendlala esabalele futhi abantu bebhuqwa yindlala kukhona osaziwayo abasebenzisa ithuba lokuxhumana ukukhombisa izindlela zokupheka eziyinqaba abazilungisayo njengendlela yokudlulisa isikhathi.
Hhayi eNdiya kuphela kepha nasemhlabeni jikelele, ikakhulukazi e-US nase-Europe, amaSulumane abesezingeni lokuthola izikhala zenzondo ezisola umphakathi wonke ngalolu bhubhane. Izindaba nevidiyo yomgunyathi, kanye nokukhuthaza okuthunyelwe, kuyanda, nokuyinto ebuhlungu.
Amaqembu ezepolitiki azama ukwenza utshani ngenkathi i-COVID Sun ikhanya. Bangakhombisa ukuzwela okuthe xaxa esikhundleni sokufaka igciwane lezepolitiki.
Njengenjwayelo abangathembekile basebenzisa imithombo yezokuxhumana ukusunduza ngamakhambi angamanga angaba yingozi kune-COVID-19. Abanye bafisa ukuthengisa leli thuba. Abanye banikeza izeluleko noma izindaba ezingadukisa njenge: AmaShayina ahlela ngamabomu ukuthelela umhlaba futhi athathe izintambo…, Sipha amanzi bese ugoqa ukugeza igciwane…, Yidla ugarlic oluhlaza…, Sebenzisa umchamo wenkomo nomswani wenkomo…, Izibani ezikhanyayo namakhandlela nokushisa impepho ukuxosha i-corona… Izingane azikwazi ukuyibamba… njalo njalo. Bese kuba khona abantu abanikela ngezinhlelo zokusebenza zokulandela ngomkhondo ze-corona eziqukethe i-malware.
Inhloko embi yobukhomanisi ithola indawo evundile ezinkundleni zokuxhumana futhi uqhekeko kungenzeka luqhubeke isikhathi eside ngemuva kokuthi i-coronavirus inyamalale noma inciphe.
Ukumaketha Ngokuthinta Okubalulekile
Ubuhle bezindaba zenhlalo ukuthi ungagxila kuphela ekwakhiweni komkhiqizo nedumela lakho futhi ungakusebenzisa kuphela ekuxhumaneni nomphakathi. Ukumaketha namuhla kushintshe isimo salo kancane ukufaka i-patina enobuntu emsebenzini wayo.
Izinkampani manje zisebenzisa imithombo yezokuxhumana ukukhombisa ukukhathazeka ngamakhasimende futhi zifinyelela ukusiza nganoma iyiphi indlela ezingakwazi ngayo, hhayi nje usizo oluhlobene nomkhiqizo. Lesi yisikhathi sokwakha ukwethembana, ukukhulisa ukuzethemba, nokukhulisa ubudlelwano. Izinkampani ezikhathalelayo zenza lokho nje. Thola umusa namuhla. Kuzohumushela kwimali engenayo ngokuhamba kwesikhathi ngoba abantu bayakhumbula.
Abathengisi bedijithali basebenzise amagama angukhiye aqondile aqoqwe ocwaningweni. Manje kufanele baphinde bacwaninge amagama asemqoka ngokugcizelela kumagama ahlobene ne-COVID-19 ukudala umthelela ohlukile futhi oshoyo kokuqondiwe. Umuntu kufanele futhi akhumbule iBrandwatch ukuthola ukuthi imizwa ezungeze okuthunyelwe okuhlobene negciwane le-corona imbi kakhulu.
Into eyodwa ephawuleka mayelana ne- ubhadane lwezifo ezinkundleni zokuxhumana ukuthi i-Youtube, i-Facebook, ne-Twitter basebenzela ukwenza intando yeningi ulwazi nokuqeda ubuthi kokuthunyelwe.
Ngokombono obanzi, umuntu angasho ukuthi labo abasebenzisa imithombo yezokuxhumana ukwenza okuhle bazokwenza lokho futhi labo abathambekele ekusebenziseni izinkundla zokuxhumana ukwenza okubi bazokwenza njalo. Ubhadane luguqule izinto kancane ezinkundleni zokuxhumana kodwa, njengoba besho, lapho izinto ziguquka ngokwengeziwe, kulapho zihlala zinjalo. Sizokwazi, ezinyangeni eziyisithupha kusukela manje.
Tags: i-covid-19Eqinisweni ukuhlolwaUJuggy MarwahaK GaneshNetflixubhubhaneudumo iqembuzokuxhumana kabizokuxhumana okuhleTwitterwhatsappyoutube
Ungawathola Kanjani Amafonti nge-Adobe Capture